I-iPhone 13 iya kubandakanya i-WI-FI 6E entsha esemgangathweni | IPhone iindaba
I-iPhone 13 iya kubandakanya i-WI-FI 6E entsha esemgangathweni
Nje ukuba sicace gca malunga nokuba uluhlu olulandelayo lwee-iPhones kulo nyaka luya kuba njani kwinxalenye ngaphandleNgenxa yokuvuza kweesampulu zentsimbi ukuvavanya ukulungeleka kwezembozo ezintsha, kuya kufuneka sifumanise ukuba zeziphi izinto ezintsha abaza kuzizisa ngaphakathi.
Kwaye enye yazo yile ilandelayo iPhone 13 Ziya kuhambelana nomgangatho omtsha woqhagamshelo lwe-6G 6E XNUMXE WI-FI. Sele siyazi enye into.
Ixesha liyadlula ngokungathandabuzekiyo, kwaye kusekho okuncinci nokuncitshisiweyo kokumiliselwa kwe-iPhones kulo nyaka. Kwaye nangona iApple ingayifuni, kancinci kancinci bafumanisa ezinye zezinto ezintsha ezinokubandakanya i-iPhone 13 entsha esiza kubona kuyo NgoSeptemba.
I-DigiTimes ithumele nje a ingxelo Apho echaza ukuba ii-iPhones ezizayo kulo nyaka ziya kuhambelana nomgangatho omtsha woqhagamshelo olungenazingcingo I-WI-FI 6E.
Iakhawunti ukuba abavelisi bezinto I-GaAs IC iyaphumelela I-Semiconductors kunye neNkampani ye-Wireless Wireless Semiconductor, kunye Iifoto ezibonakalayo Inkampani ye-Epitaxy iya kuyonyusa ingeniso yayo ngenxa yemiyalelo ye-WI-FI 6E yeekhomputha ze-Apple ezisebenzayo ngoku.
Umgangatho omtsha we-Wi-Fi 6E, uyafana ne-Wi-Fi 6, esele ifake i-iPhone 11. Ngoku u "E" umele u "Yandiswa", okuthetha ukuba i-Wi-Fi 6 efanayo yandisiwe ibhendi ukusuka 6 GHz.
Oku kuyakuvumela i-WI-FI 6E ukuba isebenze kwibhendi entsha yamaxesha asusela kwi-5,925 GHz ukuya kwi-7,125 GHz, ivumela ukuya kuthi ga I-1.200 MHz yolwandiso olongezelelweyo. Oku kuguqulela ekubeni nakho ukuba ne-bandwidth engaphezulu, isantya esikhawulezayo kunye ne-latency esezantsi, kuvula indlela yezinto ezintsha ezinje nge-AR / VR, ukusasazeka kwe-8K, njl.
Ke indibaniselwano ye umzila ohambelanayo Nge-WI-Fi 6E kunye nenye ye-iPhone 13 entsha uya kufumana unxibelelwano olungenazingcingo olungenazingcingo phakathi kwezi zixhobo zimbini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 13 » I-iPhone 13 iya kubandakanya i-WI-FI 6E entsha esemgangathweni
Ngesiciko esitsha se-Elago seSiri Remote awusoze uphinde usilahle kwakhona
Ezi ziya kuba zezinye ze-Emojis ezintsha zezixhobo ze-iOS